India: Andro iray ahafahan’ireo vehivavy milalao sy mandihy · Global Voices teny Malagasy
India: Andro iray ahafahan'ireo vehivavy milalao sy mandihy
Voadika ny 13 Desambra 2010 15:33 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, বাংলা, عربي, Français, Italiano, македонски, Español, Ελληνικά, русский, English
India Unheard (Avy amin'ny mpandika: Azo raisina amin'ny hoe “India lavitr'andriana”) dia mampiseho antsika fankalazàna roa samihafa avy amin'ny faritra samihafa manerana ny firenena, iray andro monja, izay ahafahan'ireo vehivavy manambady avy amina vondrom-piarahamonina ara-poko mifaly havanja sy mandihy imasom-bahoaka tsy misy sakantsakana.
Dihy klasika indiana tao Kerala, avy amin'i Steve Cox, CC By
Ao anatin'ny Tribal Festival Celebrates Feminity (Fetibe anandràtana ny hasina maha-vehivavy), manazava i Devidas Gaonkar ny amin'ny maha vitsy ny fotoana ahafahan'ny vehivavy mandao ny asa fanompoana sy ny fikarakarana tokantrano sahanin-dry zareo, noho ny rafitra fanjakan-dehilahy mbola mitoetra, ary fotoana ity fetibe ity mba hihaonan-dry zareo sy hiarahany mifaly. Nitombo tao anatin'ny fijerena ny reniny sy ny anabaviny mifaly amin'io andro io izy, ary nahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fanomezana vintana ny vehivavy mba hifety tahaka ny fomba amelàna ireo lehilahy hanao toy izany.
Ny horonantsary manaraka avy amin'i Devidas Gaonkar dia mampiseho ny lanonambe Dhillo, izay fanao ny andro mialoha ny Diwali, tao Cotigao, Goa:
‘Dhillo’ dia anarana sary vongana vita amin'ny fetan-tanimanga na tain'omby mba hanehoan'ny vehivavy ny andriamanitr'izy ireo; izy io dia apetraka eo amin'ny ‘maand’ ao an-tanàna ( sehatra na lampihazo natokana hanaovana tantara na fety) ka eo ry zareo vehivavy no manao ny dihy nentin-drazana izay fantatra amin'ny hoe ‘khel’ (lalao).
Video India Unheard iray hafa, avy any amin'ny faritr'i Maharashtra, no miresaka mikasika andro iray toy io, ahafahan'ny vehivavy ao an-tanànany mandihy sy mifaly havanja:
Any ambanivohitr'i Mahasrashtra misy an-dry Rohini, nandefa ity horonantsary ity, dia ambany noho ny lehilahy no fitondra ny vehivavy. Raha malalaka sy afaka manao izay tiany ireo lehilahy, voafetra kosa izay rehetra fihetsehana tian'ireo vehivavy hatao ary mila maka fanomezan-dàlana manokana avy amin'ny fianakaviany ry zareo na dia ny hivoaka ny tokantranon-dry zareo aza. Tena voarara ho azy ireo ny mihira, mandihy na milalao imasom-bahoaka. Ireo rehetra manao izany, dia voasokajy ho vehivavy ambany saina (na lany fanahy). Na izany aza, indray mandeha isan-taona — mandritry ny andron'ny Nagpanchami dia esorina io sakana io ary ny handihy sy hilalao no andrasana amin'ireo vehivavy.
Ny India Unheard dia seha-pifanakalozam-baovao eny anivon'ny vondrom-piarahamonina natomboky ny Video Volunteers; fikambanana iray manofana ny mpikambana eny anivon'ny fiarahamonina eny ho lasa masoivoho milaza ny tantaran'ireo vitsy an'isa sy vondrom-piarahamonina natao an-jorom-bàla amin'ny alalan'ny video, tatitra alefa SMS na fitaovana fampitam-baovao sosialy hafa.